Zimbabwe Electoral Commission Inonzi Haina Kudzidzisa Vanhu Zvakakwana Maererano Nekunoyoresa kuVhota
Vanhu vazhinji vanoti vakanyoresa sevavhoti kubva pakatanga chikamu chechipiri chechirongwa chekunyoresa vanhu sevavhoti icho chakatanga neSvondo munzvimbo dzakawanda munyika.
Mumwe wevakanyoresa kuvhota muHarare West neSvondo, VaLawrence Muchenje, vanoti hazvina kuvatorera nguva yakawanda kuti vange vanyoresa kunyange hazvo pavakanyoresera paiva nemuchina mumwe chete waishandiswa kunyoresa vanhu.
Asi umwe mugari wekuStrathaven, Muzvare Yolanda Machiya, vanoti Zimbabwe Electoral Commission haisati yarongeka sezvo komisheni iyi yakatadza kuunza michina munharaunda yavo nezuro sezvavanga vakatarisira. Muzvare Machiya vanoti ZEC haisi kupa vanhu dzidziso yakakwana inobata nyaya dzekunyoreswa kwevanhu sevavhoti.
Mashoko aya atsinhirwa nemunyori anoona nezvesarudzo mubato reMDC-T, VaMurisi Zwizwai, avo vanotiwo ZEC haisi kushambadzira zvakakwana nzvimbo dzairi kunyoresera vanhu.
Sachigaro weMDC-T mudunhu reMashonaland East, VaPiniel Denga, vanoti mamwe madzishe nemasabhuku emudunhu ravo ari kunyora ma serial number emapepa anenge apihwa vanhu pavanonyoresa kuvhota vachiti izvi zviri kunze kwemutemo uye kutyisidzira vanhu zviri pachena.
Muzvare Lwazi Sibanda, avo vanove nhengo yeparamende ye’proportional representation’ vachimirira Tsholotsho North, vanoti kunyoreswa kwevanhu kuri kufamba zvakanaka chose kuTsholotsho kunyange hazvo vanhu vakawanda vasati vanyoresa sevavhoti.
VaZwizwai vakurudzira ZEC kuti igadzirise zvimhingamupinyi zvose zviri kusangana neveruzhinji pakunyoresa sevavhoti zvakafanana nekubvisa nyaya yemagwaro anoratidza kuti munhu anogara papi asati anyoresa kuvhota.
Chirongwa ichi chinopera musi wa 13 Mbudzi, chobva chapinda muchikamu chechitatu apo ZEC inenge yopinda mudzimwe nzvimbo.